Inkqubo yoyilo kuyilo lwe logo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Xa sijonga uyilo lwe logo, kubaluleke kakhulu ukuba siyazi indlela yokusebenzisa imithombo efanelekileyo kwaye mandichaze. Ilogo ayikho ngaphezulu okanye ingaphantsi komzobo obonisa isazisi seshishini okanye inkampani nokuba injani na. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuba sifunde ukwakha ilebheli ehambelana namaxabiso asisiseko, imbali kunye nokuzalwa kwale nkampani. Nje ukuba sinalo lonke ulwazi oluvela kumthengi wethu kwaye siyazi kakuhle ukuba sifuna ukuthetha ngantoni ngolwimi olubonakalayo kunye nokuba yintoni kanye kanye esifuna ukuyithetha, lixesha lokuhambisa inkqubo yoyilo esikhokelela kweyona fomyula ifanelekileyo. Ngamafutshane, singene kwisicatshulwa somsebenzi wethu omncinci kwaye ngoku kulapho kufanelekileyo nika izixhobo zethu ilizwi.
Singaphanda ngeerejista ezahlukeneyo, iitoni kunye nemibutho. Lo iya kuba ngumcimbi wokulingwa kunye nephutha ngandlela thile ukuze ungadimazeki ukuba emva kokuphumeza eyakho Inkqubo yoyilo awusifumani isisombululo obukade usikhangela. Namhlanje sifuna ukuyeka kweli nqanaba lenkqubo kwaye sifuna ukucebisa ngento eya kuthi ibe luncedo kwaye ikhuthaze kwikhondo lakho lomsebenzi njengomyili. Apha ngezantsi siqokelela ukhetho lweenkqubo apho ubumbano kunye nemizobo yeeprojekthi ezahlukeneyo zenziwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Inkqubo yoyilo kuyilo lwelogo: imizekelo ebonakalayo ekufuneka uyazi
studio yoyilo lwegraphic sitsho
Iimpawu ezintle kakhulu, kwaye ichazwe kakuhle ukuba ungaya njani kuzo. Kumnandi ukubona umsebenzi olunge kangaka.
Phendula kuyilo loyilo lwegraphic
Ndizithandile iinguqu, zibonakala zintle.
UMarco Antonio Camarena Pascual sitsho
Ndiyithande ngokwenene, imfundo kwaye ivuselele umbono.
Phendula uMarco Antonio Camarena Pascual
lily ortega sitsho
Phendula u-Azucena ortega